Review by Chris Mg
စာအုပ်အကြောင်း မပြောခင် စာရေးသူ ဆရာငဒိန်း အကြောင်း အရင်ပြောချင်ပါရဲ့။ စာရေးသူ ငဒိန်း အကြောင်းပြောရမယ်ဆို ရွှေအမြူတေက မပါမဖြစ် ဖြစ်ရပြန်တယ်။ ကိုယ် နဲ့ ကလောင်ရှင် ငဒိန်း ရဲ့ ဆုံမှတ်က ရွှေအမြူတေမို့ပါ။ လစဥ်ထုတ်…
စာရေးသူ ကိတ်မုန့်ကို စတင် သတိထားမိတာ ရွှေအမြူတေ မှာ ပါတဲ့ " ပန်" ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုမှာပါ။ ကွဲထွက်နေတဲ့ အတွေး၊ ဆန်းသစ်တဲ့ တင်ဆက်မှု နဲ့ မတူညီ တဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ရေးပြထားတဲ့…
ဓါး(၇)လက် ကြယ်( ၇)စင်း မီးစက်(၇)ပွင့် အမျိုးသား စာပေဆုရ ဆရာ၊ ဆရာမ (၇)ဦး ရဲ့ လက်ရာကောင်းတွေကို တစုတစည်းထဲ ဖတ်ရှုခွငိ့ရခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အမည်က "ရွှေချည်ထိုး သက်တံ" ပါတဲ့။ အရင်တချိန်က ဆရာ ဆရာမတွေ တစုတစည်းထဲ…
Review by Ko Pauk Mdy
“သင်းပျံ့စေသော ဝတ်မူန် “ ဆရာမပျိုးရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ဖယောင်းဥယျာဉ်ကတော့ ကလေးတွေကို စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ လုပ်အားပေးကျောင်းဆရာမလေး မြင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဘဝလေးတွေကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်ပြီး အင်မတန်မှနှစ်သက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒုတိယမြောက်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ ဇလပ်နီကတော့ ဘဝဆိုးလှတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်ပြီး စာရေးသူကိုယ်တိုင်ရေးနေရင်းက မွန်းကျပ်လာတဲ့အတွက် မြန်မြန်ဇာတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့…
“မယ်စု မယ်စု “ တစ်ရက်မှာ စာအုပ်ကြော်ငြာလေးတစ်ခုတွေ့မိတယ်။ မယ်စု တဲ့ အေးငြိမ့်မြိုင်တဲ့။ မျက်နှာဖုံးပန်းချီက ရှေးက ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့မိန်းမလှလေးရဲ့နောက်မှာ မယ်နုအုတ်ကျောင်းနဲ့မြင်းလှည်းလေး။ အဲ့တော့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ် အင်း၀မြို့ဟောင်းက ရာဇဝင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလားပေါ့။ မယ်နုအကြောင်းကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ဖတ်ဘူး။ အင်းဝက…
“ပါးပါးကလေး ခေတ်ရှေးညို” ကျွန်တော်တို့ အများစုက စာဖတ်တယ်ဆိုတာ စာထဲကနေတစ်ခုခု လိုချင်လို့ ဖတ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ “စာအုပ်စာပေလူ့မိတ်ဆွေ” “ အလိမ္မာစာမှာရှိ “ ဆိုတဲ့ ဘာဘာညာညာဆောင်ပုဒ်တွေနဲ့ ဖမ်းစားထားတဲ့ တစ်ခေတ်လဲရှိခဲ့ကြတာကိုး။ အဲ့တော့ စာဖတ်သူကို အမျိုးအစားပိုင်းခြားကြည့်ရင် အပျင်းပြေ…
“ရန်ကုန်မြို့တွင် နေနည်းတစ်ထောင် “ စာရေးဆရာအမည်က ခပ်ဆန်းဆန်း။ “ကိတ်မုန့်” စာအုပ်အမည်က” ရန်ကုန် တွင်သေဆုံးနိုင်သော နည်းပေါင်းတစ်ထောင်”ဆိုဘဲ။ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ဟိုဖတ်ဒီဖတ်လိုက်ဖတ်ရင်း တွေ့သွားတော့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါနဲ့ဘဲ ဝန်ဇင်းကို လှမ်းမှာလိုက်တော့တာပေါ့။ လူကြုံရှိတာကြောင့် သိပ်မကြာခင်ဘဲ စာအုပ်ကလက်ထဲကိုရောက်လာပါတယ်။…
Review by Thet Naing
🌺 ဒီစာအုပ်လေးဟာ ဖနွမ်ပင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ အန်းမိသားစုရဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်ဇာတ်လမ်းကို မိသားစုဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ " လောင် " က ပြန်လည်ပြောပြတဲ့အနေနဲ့ရေးဖွဲ့ထားတာပါ။ 🌺အန်းမိသားစုဟာ ခမာနီတွေ အာဏာမသိမ်းခင်ကာလမှာ မိသားစုတွေပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ ဖနွမ်ပင်မှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ အန်းမိသားစုမှာ မိသားစုဝင် ကိုးယောက်ရှိပြီး ပါ ၊…
Review by Khin Sandar Lwin
စာရေးသူရဲ့ အမှာစာအရ ဒီစာအုပ်ဟာ ရဟန်းဇာတ်ကောင်မို့ ထုတ်ဝေရ ခက်ခဲခဲ့တယ်တဲ့ ။ ကြိုတင်အသိပေးချင်တာက ဆရာမိုးသက်အောင်ဟာ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သာသနာတော် မှာ စာအုပ်ထဲကလိုမျိုး ရဟန်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ စာရေးသူက လူအများတွေကို သိစေဖို့နဲ့ သာသနာတော် မညစ်နွမ်းစေဖို့…
🥀 ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ရတာ လူ့ကမ္ဘာတစ်ဖက်ခြားက ဝိဉာဉ်တွေအကြောင်း လေ့လာနေရသလိုပဲ။ သေဆုံးခြင်း ရဲ့ အခြားတစ်ဖက်က ဝိဉာဉ်တွေကို မြင်နိုင်စွမ်း တကယ်ရှိသလား? မရှိဘူးလား? ဆိုတာ တပ်အပ်ပြောနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ ❝Goblin❞ လို၊ ❝Hotel Deluna❞ လို…